YEYINTNGE(CANADA): Sunday, September 29
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဥယျောဇဉ်
(၂၅)နှစ်ပြည့် ငွေရတု အထိမ်းအမှတ်စာစောင်
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိ၊ လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့နေဆဲဟု သူရဦးရွှေမန်းပြော
by Kamayut Media on September 29, 2013 at 8:14 pm
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတို့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်နေ့က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
သံတွဲမြို့တွင် ဘာသာခြား တစ်ဦးက သာသနာ့အလံကို ဖျက်ဆီးသည်ဟုဆိုကာ
The Voice Weekly - ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်၌ ဘာသာခြား တစ်ဦးက သာသနာ့အလံကို ဖျက်ဆီးသည်ဟုဆိုကာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သံတွဲမြို့ ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
သံတွဲမြို့ မြို့တော်ခန်းမ အနီးရှိ ငပလီ အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး ဆိုင်ရှေ့တွင် လာရပ်သော သုံးဘီးယာဉ်၏ ယာဉ်မောင်းကို ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆဲဆိုပြီး ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော သာသနာ့ အလံကို ဖျက်ဆီးသည်ဟုဆိုကာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအယောက် ၂၀၀ ခန့်က ဝိုင်းအုံမှု ဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ နေရာသို့ သံတွဲမြို့ သိမ်ကုန်း ဆရာတော် ကြွရောက်၍ လူစုခွဲရန် မိန့်ကြား ပြီးနောက် ပြန်လည် ငြိမ်သက်သွားကာ အဆိုပါ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို သံတွဲရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီး ထားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်အောက်က စစ်ဗိုလ်တွေအားငယ်စိတ်ဝင်လာပုံရ
အရင် စစ်အာဏာရှင် စနစ်အောက်က စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အောက်က စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်နဲ့ အနေအထားချင်း မတူတာတော့ အမှန်ပဲ..
၂ ပွင့် ၃ ပွင့်တွေ အသာထား... ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့်တွေရဲ့ PA တွေ ကြားမှာတောင် အရင် ခေတ်ကောင်းစဉ်က ဆိုတဲ့ စကားကို လွမ်းသလို ဆွေးသလို တမ်းတသလို ခဏခဏ ကြားနေရတော့ ကျွန်တော်တော့ ကြိတ်ပြီး ၀မ်းသာရတယ်....
NLD က မယ်မယ်ရရ အာဏာရ ပါတီ မဖြစ်သေးခင်... အရင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အရပ်ဝတ်လဲပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကသန်းကယန်း ယိုင်တိယိုင်တိုင် ဦးဆောင်နေရချိန်မှာတောင် အရင်လို သူတို့ကို လှည့်မကြည့်အား အခွင့်အရေး မပေးအားတော့ လူတွေက အားငယ်စိတ်ဝင်လာပုံရတယ်.
ငါတို့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး အမြင့်ဆုံး ရည်မှန်းချက် တပ်ချုပ်ကြီး အနည်းဆုံး တိုင်းမှူးလောက် မှန်းထားတဲ့ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကြီးလည်း အရောင်မှေးမှိန်လာတယ်... ဒါတောင် NLD က အာဏာရ ပါတီ မဟုတ်သေးဘူး... NLD သာ အာဏာရ ပါတီဖြစ်သွားရင် ငါတို့တော့ ခွေးဖြစ်ရ ချည်သေးရဲ့ ဆိုတဲ့ သောက်တလွဲ အကြောက်တရားကလည်း ခေါင်းထဲ စွဲနေတယ်ဆိုတာ ရေးနေကြတဲ့ စာတွေထဲ ထင်ဟပ်နေတယ်
NLD ဟာ စစ်တပ်နဲ့ အတိုက်အခံဖြစ်နေတာ မဟုတ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေနဲ့သာ
အတိုက်အခံဖြစ်နေတာ ဖြစ်တယ် .. ဒီလိုအနေအထားမှာ အွန်လိုင်းပေါ်က တပ်မတော်သား ဆိုတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ၈၀ % လောက်က NLD ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ကို ကိုက်စားတော့မယ့် ဘီလူးသဘက်ကလို အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်နေကြတာ မြင်တော့ ရီစရာကောင်းသလို သနားဖို့လည်းကောင်းတယ်... ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ ရှေ့ကို ဆက်သွားဖို့ ဆန္ဒ လုံးလုံး မရှိပဲ ပြန်မျှော်လင့်လို့ရသေးတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မျက်စောင်းထိုးနေတယ်...
ဒီလို စိတ်မျိုးတွေနဲ့ပဲ လာမယ့် ၂၀၁၅ မှာ NLD ပါတီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အင်အား အာဏာ ကြီးထွား မလာအောင် စွမ်းစွမ်းတမံ အသက်ပေးလို့ အွန်လိုင်းမှာ Propaganda ဆန်ဆန် လုပ်နေကြတာ အတော့်ကို သိသားလွန်းနေပါတယ်.... ယုတ္တိရှိအောင်လည်း လုပ်ကြပါ... အရင်လို ခေတ်မျိုး ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ပကတိ အမှန်တရားကို လက်ခံလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ... ပြည်သူက မွေးတဲ့စစ်သား ပြည်သူတွေအတွက် အသက်ပေး ကာကွယ်နေတဲ့ စစ်သား ပြည်သူ့ တပ်မတော်သား.. ဘာညာသာ ပြောနေတာ..
လတ်တလော ပြည်သူအများစုက လိုလားကြောင်း သိသာနေတဲ့ NLD ပါတီကျမှ .. ဟင့်အင်းဆိုတော့.... ?
ကာချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက် မှာ နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာရှိစွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကေအင်ယူ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေ မနေ့က နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံရာမှာ အခုလိုပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
" ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က သူကတော့ အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ် နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို သမ္မတကြီးနဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်ကို သစ္စာရှိစွာနဲ့ ခံယူသွားမယ်ဆိုတာကို ပြောပါတယ်၊"
အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က သူ့အနေနဲ့ နောက်ကြောင်းပြန်လည့်မှာ မဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာ ကတိပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆောက်အဦးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအင်အားစုရဲတပ်ဖွဲ့က ဒုတ်တွေဖြင့်ဝင်ရိုက်
လက်ပန်းတောင်းတောင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနိက အဆောက်အဦးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအင်အားစုမှ ဆားလင်းကြီးဒေသခံ ၅၅ ဦးဟာ မန္တလေး၊ အမရပူရမြို့နယ်မှ
လက်ပန်းတောင်းတောင်စီမံကိန်းရှိ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ စေတီတော်နဲ့ သိမ်တောင်ဆီကို ယနေ့ညနေပိုင်း ၃နာရီခန့်မှ စတင်ပြီးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြပါတယ်။
လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာမှာ ခွင့်ပြုချက်တင်မထားတာကြောင့် အမရပူရမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က တားမြစ်ပေမယ့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေက လက်မခံဘဲ ဆန္ဒဆက်လက်ထုတ်ဖော်ချီတက်နေကြပါတယ်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၃၀ခန့်က လုံခြုံရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။
ဦးဇင်း ဦးတိက္ခဥာဏ မိန့် တော်မူပြီ
လက်ပံတောင်းတောင်ရှိ လယ်တီဆရာတော်ကြီး၏ သိမ်နှင့်စေတီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက် လက်ပန်တောင်းတောင်အထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်ပြီး ကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပါက ပါဝင်မိမည်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလာမည်ကိုအလွန်စိုးရိမ်ကြောင်း လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်စခန်းဖြိုခွင်းမှုကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရခဲ့သော ဦးတိက္ခဥာဏမှ ယနေ့ (၂၉၊ ၉၊ ၂၀၁၃)ညနေတွင် မိန့်တော်မူသည်။
လက်ပန်တောင်းတောင်ဒေသရှိ ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့်မကြာခင် ဖြိုဖျက်ခံရတော့မည့်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သိမ်နှင့်စေတီတော် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေးအတွက်မန္တလေးမြို့မှ ချီတက်လာသောပြည်သူများ စစ်ကိုင်းတံတားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးစစ်ကိုင်းမြို့ကို စဝင်ချိန်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသံဆူးကြိုးဖြင့်ကာရံလိုက်ပြီး ဒုတ်တွေဖြင့်ဝင်ရိုက်နေပြီပြည်သူတွေကို ဆွဲရမ်းထိုးကြိပ်နေပြီ မြင်းခြံမှကိုသန့်ဇင်နှင့်နှစ်ယောက်ဖမ်းသွားပြီ၊ယခုကိုသန့်ဇင်ပြန်လွတ်လာပြီပြည်သူတွေလက်ခြင်းချိပ်ပြီလမ်းပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်ပြီလုံထိန်းများကားပေါ်ဆွဲတင်ရန်ကြိုးစားနေသည် အချုပ်ကားများ၊လူနာတင်ကားများပါ အသင့်ရှိနေသည်၊၊ ပြည်သူများမှစစ်ကိုင်းမြို့ကိုဝင်နိုင်ရန် ဆက်လက်ကြိုးစားနေသည်၊၊
အခု ကောင်းမှုတော်ကို ရောက်ကြပါပြီ။
ကြားရတာကတော့ ရဲတပ်ရင်း(၁၆) ကို လွဲလိုက်တယ်လို သိရတယ်။ ရဲတပ်ရင်း (၁၆) ကတော့ နာမည်ရှိပြီးသားပါ။ လက်ပန်တောင်းမှာ သူ့လက်ရာတွေပဲများပါတယ်။
မိုးကလဲ တအားရွာထားပါပြီ။ လုံခြုံရေးကိုတော့ အထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။
စစ်ကိုင်းမြို့အဝင်မှာ တကယ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ မီဒီယာများရှေ့မှာမို့ အလျော့ပေးတာနေမှာပါ။
ဒီညတော့ ကောင်းမှုတော်မှာ နားသင့်ပါတယ်။
* လယ်တီသိမ်ကာကွယ်ရေး ချီတက်ပွဲကောင်းမှုတော်ဘုရားတွင် ညအိပ်နားမည် *
၂၉-၉-၂၀၁၃ ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ် ၊
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ဖြိုဖျက်ခံရတော့မည် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သိမ်တော်နှင့် စေတီတော်အားထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်မန္တလေးမြို့မှနေ လက်ပန်တောင်းတောင်ခြေအထိချီတက်လာရာ စစ်ကိုင်းကောင်းမှုတော်ဘုရားကို ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်၊ အချိန်မှာ ညနေ (၆) နာရီကျော်ပြီဖြစ်သောကြောင့် လမ်းခရီးဘေးအန္တရာယ်များကို ရှောင်လွဲနိုင်ရန် ကောင်းမှုတော်ဘုရားတွင် ညအိပ်နားမည် ဖြစ်သည်။ မနက်ဖြန်မနက်တွင် ချီတက်ဆန္ဒပြမှုကို လက်ပန်တောင်းတောင်ခြေထိ ဆက်လက်ချီတက်မည် ဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ပြည်သူများ၏ အားပေးကူညီမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ညအိပ်နားမှုတွင် စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ ကူညီပေးမည်ဟု သိရသည်။
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းက ဒေသခံများ အခက်အခဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိ၊ လုံခြုံရေးနှင့်...
သံတွဲမြို့တွင် ဘာသာခြား တစ်ဦးက သာသနာ့အလံကို ဖျက်ဆ...